पाँच वर्षभित्र काठमाडौं जिल्ला देशको नमूना संघको रुपमा विकास गर्ने हामीले खाँका बनाएका छौं । « Sahakari Nepal
पाँच वर्षभित्र काठमाडौं जिल्ला देशको नमूना संघको रुपमा विकास गर्ने हामीले खाँका बनाएका छौं ।
प्रकाशित मिति : 22 February, 2015 7:19 am
नेशनल कोअपरेटर्स एलाईन्सका तर्फबाट जिल्ला सहकारी संघ लि काठमाडौँको आसन्न निर्वाचनका लागि सिताराम काफ्ले नेतृत्वको टिमको घोषणा भएको छ । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको साधारण सभा आगामी फागुन १५ गतेदेखि शुरु हुँदैछ, यसै विषयमा अध्यक्षका प्रत्यासी सिताराम काफ्लेसँग सूचना चौतारी सञ्चार सहकारी संस्थाको आयोजना एंब सहकारी नेपालको प्रस्तुती ‘सहकारी मेच’ गरिएको समसामययिक कुराकानी ।
पाँच वर्ष भित्र जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंमा कायापलट ल्याउछौं साधारण सभामा भाग लिन आउने प्रतिनिधिकै विषयमा विवाद भयो, अहिले तयारी कस्तो भइराखेको छ ?
आगामी १५ गते उद्घाटन सत्र हुन्छ १६ गते मतदान हुने कार्यक्रम रहेको छ । म अध्यक्षमा उठ्ने तयारी गरेको छु । अहिले म लगायतको मेरो टिम बलियो छ । तयारी पनि त्यही अनुसार गरेका छौं । काठमाडौँ जिल्लामा अहिले १ हजार ८ सय २० संस्थाहरु आवद्ध छन् । त्यसमा खारेज र मर्जर गरेर जम्मा १९ वटा छन् र बाँकी १८ सय १ वटा संस्था रहेका छन् । यिनै सहकारी संघसंस्था प्रतिनिधिहरु त्यो साधारण सभामा भाग लिनका लागि तयार छन् । हाम्रो तयारी खास गरेर २०७० साल पौष ३० गते जिल्ला संघको यो साधारण सभा गर्ने घोषणा भएको थियो । पौष मसान्तमा बैठक बोलाइयो र साधारणसभा माघ मसान्तमै गर्ने कुरा थियो । हामीले अनुरोध गर्यौं संस्थापन पक्षसंग, त्यसमा हाम्रो कुरा खास के थियो भने यसपाली निर्बाचनको कारणले पनि सदस्यहरु बढ्ने पनि हुनसक्छ । त्यसकारण चैत मसान्तसम्ममा साधारण सभा गरौँ भनेका थियौँ । तर यो कुरा टिमले नमानेपछि उहाँहरुको माघ मसान्त र हाम्रो चैत मसान्तको बीचबाट निष्कर्ष निकालेर फागुन १५ मा गर्ने सहमती भयो । साधारण सभाका लागी फागुन ५ गतेसम्म प्रतिनिधि परिचयपत्र लिने समय दिइएको थियो । तर त्यसमा हामीले मतदाताको अधिकार हनन् हुने गरी डेटलाईन नतोकेर साधारणसभाकै दिनसम्म मतदाता परिचयपत्र पाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौं । तर हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि फागुन ५ सम्म मात्र भनेर मिति तोकियो । फेरी फागुन ५ गते बिदा परेकाले ६ गते सर्यो । त्यो दिनसम्म हाम्रो बलियो अवस्था देखेपछि संस्थापन पक्षले ७ गते बैठक राखेर ३ दिन थपौँ भन्ने कुरा भयो । आफुले गरेको निर्णयलाई आफैले उल्टाउने जस्ता कुरा भए । तर हामीले निर्णय गरिसकेको कुरा फेरी उल्टाउनु हुँदैन भन्ने आवाज उठायौँ । हामीले पुनः बैठक बसेर निर्णय सच्याउ र अघि बढौं भनेकै हो । तर, दुई तिन दिन मात्रै थप्ने कुरा गरेपछि विवाद जस्तो देखिएको हो । हामीले विवाद गर्नु राम्रो हुँदैन भनेका हौँ ।
अनि कुरा कसरी मिल्यो त अब के हुन्छ ?
त्यसपछि फागुन ८ गतेको बैठकमा २ जना सहकारी क्षेत्रका वकिलहरु आउनुभयो । उहाँहरुले सबै हेरी सकेपछि साधारण सभा गर्ने प्रक्रिया गलत भयो जहाँबाट गल्ती भो त्यहिबाट सच्याउनुपर्छ अथवा साधारणसभा नै स्थगन गरेर नयाँ मिति तोक्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएर जानुभयो । तर संस्थापन पक्षका उहाँहरुले दुवै कुरा मान्नु भएन । हामी पनि हाम्रो अडानमा यथावत रहेका छौँ । अब १५ गतेसम्म जिल्ला संघमा आवद्ध सबै सदस्यहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । सबै संस्था सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग बमोजिम निर्णय भएर साधारण सभामा होमिएका छौं ।
सहकारी संघमा यस्तो विवाद किन भएको होला ?
सदस्यहरुको दीगो विकासका लागि, गुणात्मक विकासका लागि भन्दा पनि जो अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरु संघलाई कब्जा गर्ने मनस्थितिले आफ्नो अनुकुल काम गरिरहनु भएको छ । यी क्रियाकलाप आफैमा बिरोधाभाष तथा हाँस्यास्पद रहेको छन् । यस्ता क्रियाकलापहरुले कुनै पनि हालतमा संघलाई राम्रो गर्दैन । मतदाताको अधिकारका लागि हामी लड्यौँ, लडिरहेका छौँ र लडिरहनेछौँ । संघलाई कब्जा गर्ने रणनीति बनिरहेको बेला कसरी तपाईको प्यानलले जित्छ त ? सहकारी कुनै पार्टी भन्दा पनि जनताको सम्पत्ति हो । यसलाई कुनै अमुख दलको संगठन जस्तो गरी लैजानु राम्रो हुँदैन । सहकारीले मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा सहकारी भित्र प्रवेश गरेको राजनिति हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । संगठित रुपमा सहकारी कब्जा गर्ने वातावरण जुन उहाँहरुले बनाउदै जानुएको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मुल्य मान्यता तथा स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता हनन् हुनसक्छ । सहकारी भनेको पार्टी विशेषमा मात्रै रहन थाल्यो भने आम जनताको चाहना भावनामा ठेस पुग्छ । अहिले ५० औँ लाख मानिसहरु सहकारीमा आवद्ध छन् । उनीहरुको विश्वास माथि कुठाराघात हुने अवस्था कदापी हुनुहुँदैन । त्यसैले मेरो र हाम्रो टिमको उम्मेदवारी प्रजातान्त्रिक पद्दतीलाई विकास गर्ने, दीगो बनाउने, सहकारीलाई विश्वास गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने किसिमको सहकारी पद्दती विकास गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । सहकारी नेता दिपकप्रकाश बास्कोटाले लामो समय नेतृत्व गरेको सहकारी जस्तो बनाउन जरुरी छ । यो हाम्रो मान्यता हो । अनि अर्को कुरा प्रजातन्त्र नरहेको ठाँउमा सहकारीहरु पनि राम्रोसँग रहन सकेका छैनन् । त्यसैले मैले पटकपटक भन्दै आएको कुरा यो प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने प्राथमिक स्कूल हो । सहकारीलाई तहसनहस पारियो भने प्रजातन्त्र नै नरहने खतरा हुनसक्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको सम्मान गरिएन भने प्रजातान्त्रिक संस्कार हराउन सक्छ । जसरी सहकारीहरुको संख्या बढिरहेका छ, यस्तो अवस्था नरहन सक्छ । यी मुद्दाहरुलाई उठाएर हामी साधारण सभामा जादैछौं । हाम्रो जित सुनिश्चत छ ।
तपाईंको नेतृत्वको प्यानलले जित्यो भने के गर्नुहुन्छ त ?
स्वभाविकरुपमा काठमाडौंका सहकारीहरुको छाता संगठन जिल्ला सहकारी संघ हो । यसमा सदस्य हुदैँ जाने बन्द हुदैं जाने हुनुहुदैँन । काठमाडौं जिल्ला संघमा आबद्व भइसकेपछि हामी सहकारी पद्वती सिकाउँछौं । सिष्टमको कुरा सिकाउँछौ, तालिम सिकाउँछौं, सफ्टवेरको कुरा सिकाउँछौं । ऋण सम्बन्धी रिकभरी, रिकाउन्ट, मार्केटिङसम्बन्धी परामर्श गर्छौ । मेरो नेतृत्वको टिमले पाँच वर्षभित्रमा जग्गा खरिद गर्छाै, दाताहरुसँग मिलेर भए पनि भवन बनाउँछौं । अहिले ललितपुर जिल्ला संघको आफ्नै भवन छ, तर, हामी भाडामा बस्नुपरेको छ । सटिर्फिकेट डेपलभमेन्ट कोअपरेटिभ चलाउने छौं । हामी संस्थाहरुबीचमा बैकिङ कारोबार गर्ने छौं । इन्टरलेन्डिङको काम गर्ने छौं । अव्यवस्थित कर्जा सूचना व्यवस्थित गर्ने छौं । एक व्यक्ति एक सहकारीको अभियान कार्यान्वयन गर्ने छौं । मेम्बर इन्फरमेन्सन सिष्टम सञ्चालन गर्र्छाै । मेम्बरसिपमा डुब्लिकेशन नहोस् भनेर त्यसतर्फ हामी क्रियाशील हुने छौं । दिगो गुणात्मक र गतिशील कुरामा विशेष ध्यान दिनेछौं । काठमाडौंमा धेरै संस्था छन्, विकृति पनि धेरै नै छन् । सहकारीहरुबीचमा बिस्तारै एकीकरणको प्रयास गर्छाै । पाँच वर्षमा काठमाडौं जिल्ला संघ, साच्चिकै राजधानीको संघ, सबैभन्दा बढी सहकारी सदस्य रहेको उदाहरणिय संघ बनाउछौं । सहकारी बैंक, नेफस्कुनपछि तेस्रो ठूलो सदस्य भएको संघ पनि हो यो । यहाँ अर्बाैको कारोबार गर्ने सहकारी धेरै छन् । सम्भावनाहरु पनि प्रचुर छन् । समस्याहरु पनि प्रचुर छन् । हामी सहकारीहरुलाई अझै गुणात्मकतातर्फ लैजाने प्रयत्न गर्छाै । चूनौतीहरुको सामाना गर्दै विभिन्न ध्रुवमा लागेका सहकारीलाई एकीकृत गर्दै सहकारीको विकास गर्न केन्द्रित गर्ने छौं । त्यहाँ कुनै बिचार विशेष हुदैँन, प्रजातान्त्रिक पद्वतीअनुसार सञ्चालन गर्ने, विकृति न्यूनिकरण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जाने छ । पाँच वर्षभित्र काठमाडौं जिल्ला संघको देशको नमूना संघको रुपमा विकास गर्ने हामीले खाँका बनाएका छौं । पाँच वर्षपछि नेतृत्व ह्यान्ड ओभर गर्दा संघ सिष्टममा भएको, पूर्वाधारको विकास भएको, सबै सदस्य खुसी भएको अवस्था आउनेछ, हामीले संघमा कायापलट गछौं । त्यो रुपमा संघलाई विकास गर्ने सपना बोकेर जिल्ला संघमा जान लागेको हौं । काठमाडौं जिल्ला संघको स्थापनाकालदेखि म क्रियाशील रहेको छु । २०५६ सालमा अध्यक्षको प्रत्याशी पनि हो । एक मतले पछाडि परेको थिए । आफैले जन्माएको संघ भएकाले यसको नेतृत्व गर्ने चाहना छ, भिजन पनि छ । देश विदेशका मान्छेहरु आउँछन्, काठमाडौं जिल्ला संघ कहाँ हो भन्दा कोठामा देखाउनुपर्ने अवस्था चिर्दैै पाँच वर्षभित्र आफ्नै भवनमा संघ हुने छ । सुविधासम्पन्न भवनमा संघ राख्छौं । उत्पादक र उपभोक्तालाई जोड्ने काम गर्छाै सहकारी प्रणाली मार्फत । उत्पादन गर्ने हातदेखि उपभोग गर्नेसम्मको सहकारी प्रणाली विकास गर्ने छौं । त्यो दिशामा म र मेरो टिम लाग्ने छ । त्यसैका लागि मेरो उम्मेदवारी हो, हाम्रो टिमको उम्मेदवारी हो ।
सहकारीमा राजनीति प्रत्यक्ष देखिरहेको छ, तपाईहरुलाई अर्को पक्षले आरोप लागिरहेको छ नि खास के हो ?
नेशनल को–अपरेटर्स एलाईन्स राजनीतिक संगठन होइन, सामाजिक संस्था जस्तै काम गर्ने संस्था हो । २०४८ पछि दीपकप्रकाश बास्कोटाले १७ वर्ष सहकारीको नेतृत्व गर्नुभयो । त्यो बेला सहकारीमा राजनीतिकरण हुदैँन्थ्यो । दीपकप्रकाश बास्कोटा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, मन्त्रीसमेत भइसकेको मान्छे होे । तर, त्यो बेला सहकारीमा राजनितिको गन्ध थिएन । खासगरी प्रजातान्त्रिक शक्तीहरुले सहकारी राजनीति गर्ने थलो होइन, यो सामाजिक थलो हो भन्न चाहे र गरे पनि त्यही । हाम्रो चाहना सहकारीभित्र राजनीति गर्नु नै होइन । तर के छ भने एउटा शक्ती संगठितरुपमा सहकारीमा राजनीति गरिरहेको बेला त्यो शक्तीलाई रोक्नको लागि एलाईन्सले ट्राफिकको काम गरेको मात्र हो । राजनीतिकरण गर्न हुदैँन है भनेर हामीले एलाईन्स गठन गरेर अघि बढेका हौं । सहकारी प्रजातन्त्रिक संगठन हो, सहकारीलाई प्रजातान्त्रिक पद्वती, प्रजातान्त्रिक बाटो र प्रजातान्त्रिक अबधारणाबाट अघि लैजानुपर्छ भन्ने एलाईन्सको अठोट हो । संगठित रुपमा सहकारी कब्जा गर्न खोज्ने शक्ती छ, त्यसलाई रोक्न अर्को शक्तीको रुपमा एलाईन्स आएको हो । जुन समग्र सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता हो ।